Mpamatsy sokajy fampidirana sy fampidiran-dra - Mpanamboatra sokajy fampidirana sy fampidiran-dra any China
Napetraka ny fampidiran-dra
Ny setrin'ny fampidiran-dra dia azo ampiasaina amin'ny famoahana rà mandrefy sy voafehy amin'ny marary. Izy io dia vita amin'ny efitrano fitetezana varingarina miaraka amin'ny / tsy misy ventiny omena sivana hisorohana ny fidiran'ny fivontosana ao amin'ilay marary.
1. Tubes malefaka, misy elastika tsara, mangarahara avo, miolakolaka.
2. Efitra mitete mangarahara miaraka amin'ny sivana
3. Sterilan'ny entona EO
4. Sehatra hampiasaina: amin'ny fampidirana ra na rà ao amin'ny klinika.
5. Modely manokana rehefa angatahina
6. Maimaim-poana ny latsa / DEHP
IV napetraka fampidirana kateter
Ny fitsaboana fampidirana dia azo antoka kokoa sy mahazo aina kokoa
Fametrahana hazavana matevina azo antoka napetraka
Ity vokatra ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fampidiran-drongony amin'ny zava-mahadomelina izay mora simba amin'ny fotony sy ny fanafody anti-fivontosana. Tena mety amin'ny fampidirana klinika ny tsindrona paclitaxel, tsindrona cisplatin, tsindrona aminophylline ary tsindrona sodium nitroprusside.
Fametrahana hazavana manohitra hazavana
Ampidirina ho an'ny fampiasana tokana (tsy misy DEHP)
"Fitaovana maimaimpoana DEHP"
Ny setroka fampidirana tsy misy DEHP dia ampiasain'ny olona maro kokoa ary afaka manolo tanteraka ny famafana fampidiran-drazana. Ny zaza vao teraka, zaza, tanora, vehivavy bevohoka, vehivavy mampinono, marary antitra sy marary ary marary mila fampidirana maharitra dia afaka mampiasa azy io soa aman-tsara.
Napetraka ho an'ny fampidirana sivana marina
Ny soritr'aretin'ny tsiranoka tsy azo tsinontsinoavina amin'ny fampidirana dia azo sorohana.
Ny fandinihana ara-pahasalamana dia nanaporofo fa ny ampahany betsaka amin'ny fahasimbana ara-pahasalamana ateraky ny setroka nampidirina dia vokatry ny potika tsy mety ritra. Amin'ny fizotran'ny klinika dia sombiny maro kely kokoa noho ny 15 μm matetika no novokarina, izay tsy hitan'ny mason'izy ireo ary mora tsinontsinoavin'ny olona.
TPE fametahana sivana marina napetraka
Ny rafitra membrane fijanonana fampidirana tsiranoka fanamafisam-peo dia mampifangaro ny fihenan'ny vahaolana amin'ny fiara sy ny vahaolana amin'ny fitsaboana. Azo ajanona tsara ilay ranoka na dia miova be aza ny toerana misy ny vatana na atsangana tampoka ilay fampidirana. Ny fandidiana dia mifanaraka, ary mora kokoa noho ny an'ny famafazana mahazatra aza. Ny firafitry ny membrane dia mijanona mampiditra tsiranoka fampidiran-dresaka dia mifaninana kokoa ary manana voka-tsena tsara kokoa.
Ajanony ny tsiranoka fampidiran-tsivana fanamarinana tena izy (tsy misy DEHP)
Ajanony ny tsiranoka fampidiran-tsivana fanamarinana marina
Fantsona fanitarana (miaraka amin'ny valizy telo-lalana)
Ampiasaina indrindra izy io ho an'ny fanitarana fantsona ilaina, fampidirana karazana medine maro miaraka ary fampidirana haingana. Izy io dia misy valiny telo ho an'ny fampiasana ara-pitsaboana, fomba roa, satroka roa, lalana telo, fantsona fantsom-bozaka, mpandrindra mikoriana, malefaka fantsona, ampahany tsindrona, mpampitohy mafy, foibe fanjaitra（hoy ny mpanjifa'takiana).
Mora amin'ny puncture sy dosis ary mora ampiasaina.